Ungayifumana njani ishishini lakho ngokusebenzisa ubunzima kunye noSemalt?
Ngexesha lokuphuhliswa okungalawulekiyo kwe-Intanethi kunye nefuthe layo elonyukayo, ubukho beshishini eligcina iindleko kunye neliphumelelayo alithandeki ngaphandle kokudala iwebhusayithi yakho. Nangona kunjalo, indawo akufuneki yenziwe kuphela kodwa isebenze ngokufanelekileyo kwaye ifumaneke ngokulula kubathengi kunye nabakhuphisana ngokusebenzisa isikhangeli. I-SEO yewebhusayithi iya kukuvumela ukuba uthathe inkampani yakho ngaphandle kweengxaki kwaye utsale abathengi abatsha.
Ukuthengisa ukukhangela kubandakanywa kubandakanya i-SEO yangaphakathi, ukuphuculwa kobutyebi bangaphandle, kunye ne-SERM, okuthetha ukuthi isebenze kunye nenkampani igama kwi-Intanethi. Ukwenza imisebenzi esele ikhankanyiwe kuya kunceda ukutsala abathengi, abasebenzi, okanye amaqabane; phucula idumela lenkampani phakathi kweziphumo zophando; andise inani lee-oda okanye zeenkonzo; andise ukuthembela kubaphulaphuli ekujolise kuko; qinisekisa ukufikelela okuphezulu.
Ke, indawo ayonyusi ukugcwala nje kuphela, kodwa iqala ukusebenza nabakhenkethi kakuhle.
Kutheni ukhetha uSemalt?
Ngomsebenzisi, ixesha lokuqala elijamelene ne-SEO-ukukhuthaza indawo, kunzima ukukhetha phakathi kwamathuba amaninzi e-SEO anikezelwayo. Ukuba izigidi ngezixhobo ezikhuphisanayo ezikwi-intanethi zithintela indawo yakho ekufumaneni inqanaba eliphezulu kuGoogle, ukuba isitalato sinokugcwala, nangona inani elaneleyo labathengi, uSemalt uya kulincomela ishishini lakho kwinqanaba elilandelayo.
Fumanisa uSemalt njengentengiso yobuchule kunye nenkonzo yokuKhetha ukuSebenza ngeeNjini, eya kuba yenye yezixhobo ezisebenzayo zokuphucula izixhobo zakho ezikwi-Intanethi. Inkqubo yokuphakanyiswa esetyenziswa yinkampani yethu yeyonke kwaye ilungele phantse zonke iintlobo zamashishini akwi-Intanethi. Ukusebenza kweinjini yokukhangela ye-Semalt kuya kukuvumela ukuba useke ukuhamba rhoqo kwabasebenzisi be-Intanethi abajongiweyo kwisiza. Kungenxa yokuba inkqubela phambili enokuthi ifezekiswe ngokusebenza kwayo ayitshabalali, ngenxa yoko indawo iya kuqhubeka nokufumana izithuthi kwanasemva kokupheliswa ngokupheleleyo komsebenzi owenziwe yi-SEO.
I-Semalt iya kukunceda ufumane owona mthombo mkhulu wezithuthi ofumaneka kwi-Intanethi. Kuba ubuncinci sisiqingatha sabo bonke iindwendwe zesiza zivela kwiinjini zokukhangela.
Ngombulelo kuSemalt, uya kutsala umdla wabakhenkethi, abeza kwiwebhusayithi bevela kwi-injini yokukhangela, iinkonzo zakho, iimveliso, okanye ulwazi.
Kuyafaneleka nokuthatha ingqalelo ukuba ukukhangelwa kwetrafikhi asimahla! Awudingi ukuhlawula ngokucofa okanye ukudibanisa kwiwebhusayithi yakho kwiphepha lokukhangela.
Ukuba unexhala lokuba ukuze uqhubeke nokwenza izinto ezisemgangathweni, iqela lonke leengcali kunye nangaphezulu kwenyanga yomsebenzi ziyafuneka, siza kuyikhupha intandabuzo yakho. Iingcali zethu ziya kuhlala zikhumbula iminqweno yakho kwaye ziwugqibezele umsebenzi ngokukhawuleza. Ukongeza, isidingo sokuhlaziya rhoqo idatha kwisayithi kunye nokunyusa ubunzima besikhonkwane kuthathelwa ingqalelo.
Abasebenzisi abanenkampani yabo ayinakuzimisela kwangaphambili umsebenzi wentengiso yokukhangela ngokusekwe kwisicwangciso sabo sokuthengisa sehlabathi, uSemalt uza kunceda ekukhetheni kweendawo eziphambili. Oku kuya kugxila kwimizamo yeengcali ze-SEO kunye nabathengisi kwimisebenzi enye kwaye bafezekise ukusebenza ngokugqibeleleyo.
Semalt uya kukunceda nge:
Makhe siqhubele kwingxoxo eneenkcukacha zemisebenzi onokuzifumana kunye noSemalt.
Ngokujonga ingqalelo yakho ekumgangatho ophezulu kuzo zonke iindlela iwebhusayithi, ungalahlekelwa kukusebenza kwayo. Kwabaqalayo kwicandelo lokusebenzisa ukukhangela, siphehlelela umkhankaso we-AutoSEO, obonisa iziphumo ezilungileyo ngexesha elifutshane.
Ungasebenzisa lo msebenzi ukukhuthaza iiprojekthi zakho okanye ukuphucula inkonzo yabathengi. Nangona kunjalo, ngaphandle kokukhetha komthengi ngamnye, i-AutoSEO ibonelela ngephepha eliphezulu. Ngokusekwe kuphando lwegama eliphambili kunye neengxelo ze-analytics zewebhu, eli phulo liya kukunceda ukuphucula ukubonakala kwewebhusayithi kunye nokwakha amakhonkco.
Kwangelo xesha, kungumsebenzi wamagama aphambili abaluleke kakhulu kwi-SEO. Ukucwangciswa kwamagama aphambili kukunceda ukhethe amabinzana, ezona zilungele indawo yakho.
Esi sibonelelo siya kuba yingenelo ikakhulu kubaphathi bewebhu, ii-freelancers, abanini bamashishini abancinci, kunye nokuqalisa.
Ngaba uzichaze ngokucacileyo izinto eziphambili ngokubaluleka kwaye ujolise ekukhuleni kwentengiso, inzuzo kunye nentsebenziswano? Ke i-FullSEO ilungele wena. Kubandakanya uphuhliso kunye nokuphunyezwa kwesicwangciso somthengi esithile se-SEO kunye nokunyuselwa kwi-Net. Ukuqwalaselwa kweenkcukacha kunye nokuqonda ubaluleko lwezixhobo zabathengi kuya kukuvumela ukuba uphuhlise isicwangciso sokuphucula iwebhusayithi.
Unomdla kwiinkonzo zakho okanye iimveliso abathengi ngokuqinisekileyo baya kubhekiswa kwindawo yakho, eya kuthi, kamva, ibe kufutshane kakhulu kwinqanaba le-injini yokukhangela.
Eyona misebenzi iphambili yeli phulo yile:
I-FullSEO isebenza kakhulu kwishishini lokushishina kunye nokuthengisa ngombane. Nangona kunjalo, ukugxila kumthengi othile kwenza ukuba eli phulo libe yimali yokuqalisa, oosomashishini babucala abafuna ukusebenzisa iwebhusayithi yabo ukuya kuthi ga.
Akukho mntu uthanda ukuvela kwiinkcazo ezinde nezinzima zempahla, zeenkonzo, zeenkampani. Vele ubonise abathengi bakho ngento onokuyenza usebenzisa i-Chaza ividiyo eyenzelwe ngabaqeqeshi beSemalt. Chaza kuphela umbono wakho ngamagama ambalwa, kwaye siya kukunceda ukuba wenze umboniso bhanyabhanya obonisa inkqubo yokuvelisa, imigaqo-nkqubo yenkampani imele ubulunga beenkonzo ezibonakalayo kunye nemveliso oyivelisayo. Ukungeniswa kolwazi ngendlela yefomathi yeendaba kuya kukwenza lula umbono wayo kwaye kwenza abathengi babelane nabanye ngezinto abazibonayo.
Iqela leSemalt liza kuthatha inxaxheba kuphuhliso lwengcinga, ukubhala iskripthi, ukubeka iliso kwimveliso yevidiyo, ukuphinda kwenziwe uchwephesha kunye nokuhlela.
Le nkonzo ibaluleke ngokukodwa kubanini bamashishini amancinci, ii-Startups, kunye neenkampani ezifuna umdla kubantu ekujoliswe kubo ngeprojekthi yabo.
Isifundo sokuqala sedatha kunye nolwazi ngumba ophambili kwishishini. Vavanya iimfuno zabathengi kwaye ubanike kanye oko bafuna. Gcina umkhondo kwinkqubela phambili kunye nokusebenza kwenkampani yeqela elilwa nalo, chonga imfihlo yempumelelo yalo, kunye nokuphumeza uphando olufunyenweyo. Ukuhlaziywa kwewebhu yethu kuya kukwazisa yonke into malunga nokusebenza kunye nokusebenza kwendawo yakho.
Le nkqubo iya kubonelela:
iinkonzo zokujonga ubume bemithombo ye-Intanethi,
ukuphonononga iwebhusayithi yeembangi,
Ukuchonga iimpazamo zokuphucula iphepha,
Ukufumana iingxelo zewebhu ezibandakanya konke
Ukonyusa ukubonakala kwewebhusayithi kwiwebhu.
Nawuphi na umsebenzisi unokwenza into elungileyo yohlalutyo lweWebhusayithi kuba ulwazi lolona sixhobo sinamandla kwizandla zakho.
Ukuba ukudalwa kwesiza kubonakala kuwe akunzima kangako kunokwenyusa, uSemalt uza kunceda ngalo msebenzi! Njengeengcali kwicandelo lethu, siya kwenza iwebhusayithi elungele wena. Nokuba yivenkile ekwi-Intanethi, isitudiyo sobugcisa babucala, inkampani enkulu, okanye ishishini- iingcali zakho ziya kwenza eyona mveliso ihlangabezana nazo zonke iimfuno neminqweno yomthengi.
Ukuziqhelanisa nendawo ye-Intanethi namhlanje kuguqula iwebhusayithi ibe ikhadi lekhampani yenkampani, ubuso bayo. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba ungagxili ekusetyenzisweni kweinjini yokukhangela kuphela kwizixhobo ezikwi-intanethi kodwa nasekuyileni iphepha elenzelwe ubuhle. Sikwagcina inqanaba eliphezulu lokhuseleko lwedatha ngexesha lokuphuhliswa kwesiza. Emva kokuqala komsebenzi wayo, ulwazi luya kuqokelelwa rhoqo, luqhubekeke, kwaye lukhutshwe ngendlela yeengxelo. Ke, unokulawula ukusebenza kobutyebi bakho kwasekuqaleni.
Uyilo olusebenzayo noluthandayo, ukuxhaswa rhoqo kunye nokuhlaziywa, ukudityaniswa okungenaziphene kweeplagi kunye nee-API, ukuqondwa kwezisombululo ze-cms - konke oku kuya kwenziwa nguSemalt.
Ukukhuthaza iwebhusayithi ye-SEO
Kwinqanaba lokuqala lomsebenzi kwi-web optimization, uya kudinga inkxaso yeengcali ezinamava. Siza kusebenzisa izakhono zethu, esizuze ngaphezulu kweminyaka yokuziqhelanisa, ukukukhokela ekukhuthazeni indawo yakho. Iphakheji epheleleyo yeenkonzo zokuhlalutya izalathiso zangoku zephepha lewebhu kunye neendlela zeIntanethi, ukukhangela iingxaki nokuzisombulula, ukuyila nokulungisa iwebhusayithi yeyona nto uyifunayo kwaye uya kuyifumana kuthi.
Izibonelelo zenkonzo yethu:
Iqela leengcali ezinetalente lilungele ukusebenzisana iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezingama-365 ngonyaka. Abasebenzi bethu baneengcali ezinobuchule abathetha isiNgesi, isiJamani, isiFrentshi, iSpanish, nesiTurkey. Ngokwenjenje ukuqhakamshelana nababhali-ikopi, abaqulunqi beenkqubo, abenzi bemxholo, abaphuhlisi beziza okanye inkokeli yenkampani, ungaqiniseka ukuba uyaqonda kwaye uyakwazi ukubhengeza ngeengcebiso ngayo nayiphi na imicimbi;
Kwiminyaka engaphezu kweshumi, iqela lethu elisondeleleneyo liqokelelene lisuka kwita talente, inkuthazo, kwaye iingcali ezikhuthazayo ezenze iiprojekthi ezininzi ezibe yimpumelelo. Iminyaka yokuziqhelanisa ngokuqhubekayo kunye nokuqokelelwa kwamava kuvumele iingcaphephe zethu ukuba zikwazi ukumpompa izakhono kunye nokuphuhlisa inkqubo eyahlukileyo yokusebenzisa izixhobo zenethiwekhi.
Zingaphezulu kwe-800,000 iiprojekthi ezibe yimpumelelo, kwaye abasebenzisi abangama-300,000 banelisekile ngumgangatho womsebenzi wethu;
Igalari yeeprojekthi ezigqityiweyo sisalathiso sempumelelo ye-Semalt ekusebenziseni eyayo imibono, kunye nokuhlolwa kwabathengi abanelisekileyo kuqinisekisa ukusebenza kweenkqubo.
Inkqubo eguqukayo yezaphulelo kunye nokunikezelwa rhoqo komtsalane; owona mgangatho wamaxabiso ulungileyo. Ukhululekile ukuzikhethela imisebenzi oyithandayo ngokusekelwe kwimali yakho kunye nokujolisa ekujoliseni. Sinikezela ngenkqubo elula yezaphulelo kunye nokubonelela okunenzuzo kubathengi abaqhelekileyo. Nge- $ 0.99 nje, ungazama iTyala lethu leVidiyo ye-AutoSeo yeeveki ezimbini kwaye ubone ukuba zeziphi izinto ezinomdla kakhulu kuwe. Kule meko, nokuba ukhetha i-AutoSeo, i-FullSEO okanye i-Analytics, inyanga ezintathu, inyanga ezintandathu, kwaye iiphakheji zonyaka ziya kukuzisela isibonelelo se-10, 15 kunye ne-25% ngokwahlukeneyo.
Isizathu sokundwendwela iwebhusayithi yethu
Kwindawo yethu, unokuziqhelanisa nemithetho-siseko yeSemalt kunye nophononongo lwabathengi ukuze uqonde hayi kuphela iinkcazo ze-SEO kodwa kunye neempawu zendlela yethu yokunyusa iwebhusayithi. Unokufumana lonke ulwazi olufanelekileyo malunga neenkonzo ezibonelelweyo kunye neendleko zazo kwiwebhusayithi esemthethweni yaseSemalt. Ukuba nasiphi na isihloko sihlala singasombululeki kuwe, buza umbuzo kwiqela lethu lenkxaso.